Imeko ekubhekiswa kuyo |
Inkqubo yokudibanisa i-500L eJamani
--- 500L microbrewery eJamani. I-500l microbrewery ye-Firma Hausbrauerei Leidner ifakiwe kwaye iqalile ekuqaleni kuka-2017. Ngokwenene ngamava awonwabisayo ukusebenza kunye nokusebenzisana nomnini Mnu Roland. Unobuchule kakhulu kwaye unamava malunga ne-cr ...
Inkqubo yaseJamani ye-1000L
Ndiyavuya ukwabelana ngeendaba ezilungileyo kuwe. Ngoku sinentengiso entle eYurophu, nantsi i-1000L yokuphisa. Le nkqubo yeyunithi yokuphisa iyunithi ye-4 yenqanawa ene-3pcs 1000L kunye ne-3pcs 2000L Fermenter. Kwakhona senze usambathisa kabini ngokwe t ...
IFransi 500L yokudityaniswa kotywala
Lo ngumthengi wethu waseFrance, ibhiya yiLabo du Brasseur kwaye imiselwe eFrance. Indawo yotywala yinkqubo yokudibanisa eyi-500L ngokufudumeza umphunga kunye nee-4set zesiselo seebhiya kunye neeseti ezimbini zetanki eqaqambileyo yebhiya. Umthengi ...
ICanada 7BBL Fermenter
Le fermenter ye-7BBL yayithumela ngaphandle eCanada kwaye ifumana igama eliphezulu kumthengi wethu. Ukuzoba kwe-Fermenter Phambi kokuba kuhanjiswe, umthengi uthumele isahlulo sesithathu ukujonga ...
ICanada 3.5BBL yokuphisa
Ingxelo yabathengi baseCanada
I-Bolivia i-1000L yoTywala
Lo ngumthengi wethu omkhulu eBolivia, sithethile kaninzi kunye nexesha elide. Okokugqibela, baqinisekisa ukuba bafuna ntoni ngezixhobo zokupheka. Kwakhona, umthengi undibulele ngokuba nomonde kwaye ndiqwalasele iprojekthi yakhe. Njengoko isivumelwano ekuvunyelwene ngaso kwisivumelwano, thina sh ...
IBelgium 2000L kunye ne-4000L yotywala
IBelgium 2000L kunye neprojekthi yotywala engama-4000L Ngoku sivelisa iprojekthi yotywala ka-2000L kunye ne-4000L yomthengi wethu, lo mthengi sidibene naye kumboniso waseNuremberg ngo-2018. Kwaye saxoxa ngeenkcukacha ezishushu ukwenza isicwangciso sotywala. Oku kulapha ngezantsi kukwenziwa kotywala ngoku: ...
IBelgium i-1000L Fermenter
Le brewery yamiselwa eBelgium, neyakhiwa ngo-2012. Kwakhona umnini waseFranky ufuna ukwandisa utywala ngo-2017. I-Fermenter yi-700L, kunye ne-PVRV kunye ne-PRV ziimpawu ze-KIESELMANN njengemfuneko yabathengi. ...